माता पाथिभराको दर्शन गरि दिनको सुरुवात गर्नुहोस - Khabar24Nepal	Khabar24Nepal	माता पाथिभराको दर्शन गरि दिनको सुरुवात गर्नुहोस - Khabar24Nepal
वि.सं. २०७७ कात्तिक १३ गते बिहीवार, इ.स. २०२० अक्टोबर २९, शकसंवत् १९४२, ने.सं. ११४० कौलाथ्व। आश्विन शुक्लपक्ष। त्रयोदशी, १५:२५ उप्रान्त चतुर्दशी।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। तपाईंको जीवनसाथीले पूरा दिन तपाईंको बारेमा सोच्छन्। नयाँ उद्यमले लोभ्याउँछन् र राम्रो लाभको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। हृदय नगुमाउनुहोस् – असफलता एकदम प्राकृतिक हो र तिनीहरू नै जीवनका सौन्दर्य हुन्। पर्यटन क्षेत्रले तपाईंलाई आकर्षक क्यारियर दिन सक्छ। तपाईंको अभिलाषा पुर्याउनको लागि अहिले नै तयार हुनुहोस् र यसको लागि कडा परिश्रम गर्नुहोस्। सफलता तपाईंको लागि उत्सुक भएर प्रतीक्षा गरिरहेको छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।
तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्। काममा तपाईंको सफलताको बाटो रोक्नेहरूलाई आज तपाईंले आफ्नै आँखा अगाडि गंभीर पतन भएको देख्नु हुनेछ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
पुरानो मित्रसँग पुनर्मिलन भएकोले तपाईंको आत्मालाई उज्यालो पार्नेछ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। सकारात्मक मनोवृत्तिका साथै तपाईंको भित्री मानले कार्यस्थलमा सफलता दिनेछ। भित्री गुणहरूले सन्तुष्टि ल्याउँछ – सकारात्मक दृष्टिकोणले सफलता दिन्छ। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। आफन्तको कारणले आज झगडा हुने सम्भावना छ, तर दिनको अन्त्यमा सबैको राम्रोसँग समाधान हुनेछ।
आफ्नो अप्रत्याशित प्रकृतिले तपाईंको वैवाहिक सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। यसबाट जोगिने निश्चित गर्नुहोस् अन्यथा तपाईंले पछि पछुताउनु पर्न सक्छ । आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। आज तपाईंलाई धेरै रोचक निमन्त्रणाहरू आउनेछन् – साथै एउटा आश्चर्यजनक उपहार पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। आफ्ना आमाबाबुसँग आफ्नो खुशी बाँड्नुहोस्। एक्लोपन र निराशाको भावना हटाएर तिनीहरूलाई सार्थक महसुस गराउनुहोस्। एक अर्काको जीवनलाई कम कठिन बनाउन नसके हामी के को लागि बाँचेका हौं? शरद ऋतुको रूख। आज गरेको लगानी आकर्षक हुनेछ तर तपाईंले साझेदारहरूबाट केही विरोध हुन सक्छ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने नभन्नुहोस् किनकि उनले अरू कसैलाई यो कुरा भन्न सक्छिन्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। तपाईंले अरूको सहयोग बिना महत्त्वपूर्ण कामहरू संचालन गर्न सक्छु भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईंले ठूलो गल्ती गर्नुहुँदैछ। दिन साँच्चै रोमान्टिक हुनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग राम्रो खाना, सुगंध, आनन्द, सबै मिलाएर राम्रोसँग रमाइलो समय बिताउनु हुनेछ।
आफ्नो उच्च आत्मिक शक्तिको बाबजुद तपाईं आज तपाईंसँग हुन सक्ने कसैको याद गर्नुहुनेछ। आज तपाईंको लागि नयाँ ढाँचा – नयाँ दृश्टि – नयाँ मित्र हुन सक्छन्। धार्मिक र शुद्ध प्रेमको अनुभव गर्नुहोस्। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। महिला भेनसबाट आएका हुन् र पुरुषहरु मंगलबाट। तर आज भेनस र मंगल एक-अर्कामा पग्लेका छन्।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। आज तपाईंलाई केही समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ – तर व्यावहारिक हुनुहोस् र सहयोग गर्ने मान्छेबाट चमत्कारको आशा नगर्नुहोस्। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभाव कामका कुराहरू मिलाउने विषयमा लगाउनु आवश्यक छ। एउटा सानो कुरा भए तापनि, तपाईंका जोडीले ढाँट्नाले आज तपाईंलाई दुख हुन सक्छ।
आज तपाईंको भरोसा बढ्नेछ र प्रगति निश्चित छ। अनपेक्षित सुसमाचारले तपाईंको हौसला बढाउनेछ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग समाचार सुनाउनाले उनीहरू पनि खुशी हुनेछन्। तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य केही खराब हुन सक्छ।
साथीहरूसँग साँझ रमाइलो हुन सक्छ तर धेरै खानाले भोलीपल्ट बिहान विरक्तलाग्दो हुन सक्छ भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई लामो समयसम्मका बकाया र बिलहरू तिर्नको लागि सुविधा हुनेछ। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। प्रेमयुक्त जीवनले आशा ल्याउँछ। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीको न्यानो माया महसुस गर्नु हुनेछ।
काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या बढेपछि निःसंक्रमणको काम जारी
सुर्खेतमा अपांगता सिप विकास कार्यक्रम सम्पन्न